Shiinaha Collagen ee warshad Cabitaan adag iyo alaab-qeybiyeyaal | Gelken
Cabitaanka cabitaan adag ayaa hadda loo aqoonsan yahay sida ugu caafimaad iyo waxtarka badan ee lagu kabo kolajka.
Kobaca da'da iyo saameynta arrimaha dibedda waxay dhaawici karaan qaabdhismeedka maqaarka maqaarka, xakameynaya sameynta hyaluronic acid, taas oo yareyneysa qoyaanka maqaarka, taasoo keenta fuuqbax maqaarka, daal, qalalan. Sidaa darteed, kaabista kolajka peptide iyo hyaluronic acid waxay ku siin karaan faa'iidooyin badan.
In kasta oo collagen iyo hyaluronic acid labadaba laga helo maqaarka, haddana collagenku wuxuu u dhaqmaa sida "shabaqa laastikada", isagoo dayactiraya wejiga wajigiisa isla markaana ka caawinaya maqaarka inuu iska caabiyo foorarsiga iyo duudduubashada.
Shabakada isku xidhka ah ee loo yaqaan 'collagen fibre network' ee ay samayso borotiinka kolajka ee qaab dhismeedka maqaarku waxay siisaa qaab dhismeedka aasaasiga ah ee hyaluronic acid, si markaa ay si fiican biyaha ugu hayn karto maqaarka isla markaana ay uga caawin karto maqaarku inuu qoyo oo uu qoyo.
Isla mar ahaantaana, hyaluronic acid ayaa sidoo kale ka caawisa shabakadda fiber collagen in si wanaagsan loogu fidiyo biyaha iyo bay'ada. Collagen iyo hyaluronic acid "gudaha iyo dibaddaba" si wadajir ah si ay u taageeraan caafimaadka maqaarka. Qurxinta afka, oo ah qayb ka soo baxda xilligii "heerka heerka muuqaalka", waxay u hoggaansameysaa fikradda dhaqameed ee ah "gudaha nafaqeynta dibadda" ee macaamiisha Shiinaha.
Baaxadda suuqa qurxinta afka ayaa korodhay 3.1 bilyan yuan intii u dhaxeysay 2013 iyo 2015, waana labanlaab labadii sano ee la soo dhaafay, sida laga soo xigtay xogta laga helay ZhiResearch Consulting
Mustaqbalka, suuqa quruxda afka Shiinaha waxaa la filayaa inuu galo xilli horumar deg deg ah, oo gaaraya 23.8 bilyan yuan sanadka 2022.
Ka dambeeya koritaanka xawaaraha sare, waxay ku xidhan tahay inay keento xalka tartanka.
Si kastaba ha noqotee, berrinka quruxda afka, haddii collagen oo leh heer sare oo ka mid ah ka warqabka macaamiisha si buuxda loogu biirin karo "xiddigaha soo kacaya" sida hyaluronic acid si wadajir ah loogu horumariyo suuqa, waxay hubaal u keeni doontaa awood dheeri ah horumarinta suuqa quruxda afka. iyo caafimaadka macaamiisha.
Hore: Kulliyadaha Baarka Nafaqada
Xiga: Collagen Peptide